दसैंको मुखमा किन हुँदैछ यस्तो ? – Rapti Khabar
असोज १०, धनगढी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका– ६ का दानबहादुर धामी भारतको गौरीफन्टा नाकामा भेटिए।
उनको निधारमा दसैंझैं रातो टीका टल्किएको थियो। भारतमा बरेलीको ढावा (होटल)मा काम गर्ने उनी कोरोना त्रासका कारण जेठ २८ गते मात्रै घर फर्किएका थिए। यता गुजारा चलाउन गाह्रो भएपछि दसैंको मुखमै भारततिर हिँडेको उनले सुनाए।
उनीजस्तै दैनिक १५ सयको अनुपातमा नेपालीहरू गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै भारत गइरहेका छन। त्यहीमध्ये एक हुन्, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका खोमबहादुर कुमाल। ‘गर्जो टार्नका लागि नेपालमा केही पाइएन’, कुमालले भने, ‘अनि कोरोनाको कहरका बीच भारत लागेको।’ दिल्लीमा रहेका मालिकले अब नराख्ने भनेपछि बैंङलोरतिर हिँडेको उनले सुनाए। उनी चैतको लकडाउनका बेला उर्लिंदो हुलमा घर फर्किएका थिए।
अछामका रूपेश खड्का पनि लालाबालासहित भारततिर पसेका छन्। लकडाउनका बेला लालाबालासहितै घर फर्किएका उनले घरमा गर्जो नटरेपछि दसैं, तिहार छोडेर भारत हिँडेको बताए। ‘घरमा कमाइ खान जग्गा छैन। रोजगार पनि छैन’, उनले भने, ‘सरकारले स्वरोजगार हुने कुनै कार्यक्रम पनि ल्याएको छैन। भारतमा सहजै नौकरी पाइहाल्छ। घरमा बस्यो भने भोकले मरिन्छ, भारतमा कोरोनाले मरिएला त के गर्नु ? जहाँ गए नि मरिने त हो नै।’
नेपालले भारतीय नागरिकलाई यता आउन रोक लगाएको छ। भारतले भने आधार कार्ड र पास भएका नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिएको छ। आधार कार्ड भएका आफैं र नागरिकताका आधारमा भारतीय मालिकले पास बनाएर सीमामा पठाई दिएपछि नेपालीहरू भारत जान पाइरहेका हुन्।
अछामको रामारोशन गाउँपालिका–४ का प्रकाश न्यौपाने पनि साथीहरूको समूहसँगै भारत पसेका छन्। ‘भारतीय साहुले पारि बस पठाइदिएको छ। त्यही बसमा जाने हौं’, न्यौपानेले भने, ‘पहाडी जिल्लामा केही कमाउनका लागि काम छैन। भारत नगए खान पुग्दैन।’
कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाका भएर भदौ १० गतेयता ३० हजारभन्दा बढी भारत पसिसकेका छन्। विगतमा भने यति बेला गाउँ फर्किनेको लर्को हुन्थ्यो। शिवराज भट्टले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।
रोल्पा- ‘प्युठानको खलंगा र बिजुवार बीचको जंगलमा सुरक्षाफौजलाई आक्रमण गर्न खोज्ने रोल्पाका गंगाराम पुनको घटनास्थलमै मृत्यु…’ जब रेडियोमा यो समाचार सुनिन्, धनमाया पुन छाँगाबाट खसेझैं भइन्। रेडियोले भनेको साँचो हो कि आफू भ्रममा परेको हो उनलाई ठम्याउन मुस्किल पर्‍यो। न उठेर हिँड्न सकिन्। न त बोल्न नै। उनले एकएक घन्टमा आउने समाचार कुरिरहिन्। रेडियोले त्यही […]